Ikhaya elimangalisayo eLicki Osik elinamagumbi okulala ama-2 kunye neWiFi
Indawo efanelekileyo yeholide ukuba ufuna ukuchitha iholide yokuphumla ngokuqinisekileyo likhaya leeholide zamaplanga eMušaluk, indawo emalunga ne-13 km ukusuka kwisixeko saseGospić.
Inemigangatho emibini kwaye kukho igaraji eyahlukileyo onayo. Kumgangatho ongaphezulu ubude besilingi bumalunga nama-80 cm. Indlu ifakwe kakuhle kwaye isitovu senkuni sibonelela ngokufudumala kunye nomoya omnandi. Jabulela indalo kunye nehlathi apho unokuthatha uhambo olude okanye ehlotyeni ungaqubha kumlambo okufutshane weLika. Malunga neekhilomitha ezili-13 kude kukho imyuziyam ye-Nikola Tesla enkulu.
Indawo efanelekileyo yeholide ukuba ufuna ukuchitha iholide yokuphumla ngokuqinisekileyo likhaya leeholide zamaplanga eMušaluk, indawo emalunga ne-13 km ukusuka kwisixeko saseGospić. Inemigangatho emibini kwaye kukho igaraji eyahlukileyo onayo. Kumgangatho ongaphezulu ubude besilingi bumalunga nama-80 cm. Indlu ifakwe kakuhle kwaye isitovu senkuni sibonelela ngokufudumala kunye nomoya omnandi. Jabulela indalo kunye nehlathi apho unokuthatha uhambo olude okanye ehlotyeni ungaqubha kumlambo okufutshane weLika. Malunga neekhilomitha ezili-13 kude kukho imyuziyam ye-Nikola Tesla enkulu.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 50 m / ivenkile 13 km / indawo yokutyela 13 km / idolophu ekufutshane (Gospic) 13 km / amanzi (uMlambo) 280 m